Ireo nofinofim-pilàna maro mpankafy
Shopping “Fournitures scolaires”
1. Crayon de couleurs – 6.000Ar - Page Facebook « Abscom Crea » - Contact : 034 50 357 86 2. Marqueur – 10.000Ar - Page Facebook « Abscom Crea » - Contact : 034 50 357 86
Filahiana : Manana anjara asa hafa, tsy ampoizina!
Tsy manome fahafinaretina ihany no sangan’asan’ny filahiana. Betsaka ihany koa ireo zavatra hafa vitany. Santionany fotsiny ireto.
Filahiana miletsy : Tantely hanina!
Raha toa ka sy mahatazona tsara ny olon-tianao mialohan’ny firaisana ara-nofo, dia andramo ireto fangaro ireto.
Tsy niray ara-nofo ela… ny hiverenana indray
Halaviran-toerana, fiatoana maharitra satria voafitaka, ny fotoana voafetra… maro karazany ireo antony mahatonga ny vehivavy tsy niray ara-nofo mihitsy .
Tsy mahazo fahafinaretana rehefa miray, fa maninona?
Tsy mitovy amin’ny atao hoe “vaginisme” ny “frigidité”. Afangaron’ny olona amin’ny toe-javatra mitranga amin’ny vatana, rehefa sarotra ny fitsofohan’ny filahiana eo am-panaovana firaisana ara-nofo. Fa toy ny ahoana marina àry izany hoe vehivavy “frigide” izany?
Saribakoly fakana fahafinaretana, miendrika ankizy Niteraka fanafintohinana faobe
Tohina amin'ny famokarana fa indrindra ny famarotana saribakoly fangalana fahafinaretana ho an'ny lehilahy izay miendrika ankizy vavy kely tsy ampy taona tao anatin'ny tranokala famarotana entana malaza
Mankafy miray ara-nofo ny vehivavy tia misakafo
Filàna roa voajanahary tena matanjaka ny fitiavana te hisakafo sy ny fitiavana hiray ara-nofo. Fantatrao ve fa ny vehivavy tia miray ara-nofo dia mankafy sakafo?
Ankavitsiana ireo mpifankatia no sahy mamboraka ny nofinofim-pilàny sy ny faniriana mampientana azy.
Misy amin’izy ireny anefa no tsotra kely saingy misy koa anefa no mahasadaikatra. Ireto manaraka ireto no nofinofim-pilàna isan’ny tena maro mpaniry indrindra.
Kapoka amin’ny fitombenana
Ny lehilahy, amin’ny ankapobeny, no tia mikapoka ny fitombenan’ny olon-tiany. Ilay izy toa safosafo maharary iny mihitsy no mampiakatra ny fahafinaretan’ny roa tonta.
Safosafo amin’ny vava
Karazana fanomezana omena ny olon-tiana izy ity, ankoatra ilay firaisana ara-nofo mahazatra. Mahasadaikatra ihany anefa ny mangataka azy indraindray, satria tsy fantatra raha te hanao izany ilay olon-tiana.
Ny fahatsapana hafa amin’ny vatana no tena miasa, rehefa tampenana ny maso mandritra ny firaisana ara-nofo. Mety hankafy azy ity avokoa, na ny vavy na ny lahy. Ankoatra izay, fomba iray hahafantarana tanteraka ny vatana izany.